Hindisaha Kordhinta Golaha Wakiiladda ee Puntland “Laaka sagaaro raq bay istaraan” - WardheerNews
Hindisaha Kordhinta Golaha Wakiiladda ee Puntland “Laaka sagaaro raq bay istaraan”
W/Q Maxmaed Axmed (Moqor)
Waxa maalmahan aad loo hadal hayay barraha bulshadda iyo fagaarayaasha fadhiyadda magaalooyinka waaweyn ee Puntland, hindisaha Madaxweynaha wakhtigiisu sii dhamaanayo ee mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu xusul duubka ugu jiro kordhinta golaha wakiilada ee Puntland. Kaas oo ka hor imanaya dastuurka Puntland oo ay dejiyeen xeeldheerayaal dhinaca sharciga iyo qaanuunka aqoon durugsan u leh, kuna qotomiyay dhisadda golaha wakiiladda ee xiligaasi hab iyo hanaan waaqici ah.
Sida uu qabo dastuurka Puntland qeybinta iyo dhisidda golaha wakiilada ee Puntland, waxa lagu alkumay hab heer gobol, mana aysan dhicin in wax laga bedelo ilaa afartii baarlamaan ee ka hirgalay Puntland.
Kordhinta tiradda golaha wakiiladda ee Puntland waxa ay mujinaysa sida toos ka ah ee uu mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas sharciga u baalmarayo iyo sida uu rajadii shacabka Puntland u gelinayo meel cidhiidhi ah oo aanay dib uga soo labaan karin .
Sida ku cad ilaa iyo aasaaski Puntland xubnaha golaha wakiiladda ee Puntland ma ahayn kuwa ka tarjuma baahiyaha shacabka ay wakiilka ka yihiin ee ay magacooda ku joogaan aqalka golaha wakiiladda ee Puntland. Hadaba akhriste, maxay macna ah oo ay leedahay kordhinta tiradda kolaha wakiiladda ee Puntland hadiiba aanay ahayn dad ka damqan kara baahiyaha bulshadda ay matalaan haysta.
Maahmaah Af-soomaali ah ayaa ahayd “ Laaka sagaaro raq bay istaraan” kordhinta tiradda golaha wakiiladda ee Puntland maaha mid u abuuraysa xal waaraha mushkilaadka gacan ku rimiska ah ee ka jira Puntland.
Khasaaraha ka dhalan kara kordhinta golaha wakiiladda ee Puntland.
Mushahar inaan loo heli doonin waxa taariikhada Puntland intii ay jiratay dhacay gadoodkii ciidan ee ugu badnaa intii uu taladda hayay mudane Gaas ayaga oo ka cabanaya mushar la’aan iyo in xaquuqdoodi lagu tagri falay, waxa taas kasii daran in ay isku gadaameen xaruntii golaha wakiiladda iyaga oo ay ku jiraan golihii wakiiladda
In ay abuuri karto kala tafaraaruq ku yimaada bulshadda oo ay cid waliba tiraahdo waa markayagii ee hala kordhiyo hadii kale waxan samaysanayna maamul gaara
Waxa aad u sahlanaan doonta in cid walba ay sharciga ku tagri fasho oo ay sida ay rabaan ka yeelaan
Jaahwareer siyaasadeed u hor leh oo keeni kara burbur siyaasadeed oo aan laga soo kaban karin
Maxaa ku kalifay qar iska xoornimada maxadweyne Gaas
Akhristow aan ku xasuusiyo in mudane madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu noqday madaxweynihii ugu balan qaadka badnaa ee so mara Puntland taas waxa ay rajo xumo joogta ah ku tahay shacabka Puntland waxyaabaha ku kalifay wax aka mid ah
In uu mudane madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas lumiyay kalsoonidii golaha wakiiladda ee hadda jira
Helidda xildhibaano isga la jaal ah ee doorashadda sosoocta
Fashilkii uga yimid balan qaadkiisii ahaa hal qof hal cod
Waxa haboonayd in madaxweynaha uu fiiro gaara u yeesho baahiyaha haysta shacabka mudnaantana kala siiyo sida ay u kala muhiimsan yihiin. Waxay ahayd in madaxweynuhu uu wadatashiyo la qaato salaadiinta, cuqaasha, garaadadda, beeldaajayaasha, ugaasyadda, aqoonyahanadda, culumadda, ururadda dhalinyaradda iyo haweenka dabadeetana iclaamiyo madal wadatashi si hormuudka bulshadda oo dhan ay shirkaasi uga tala bixiyaan sidii shirkii lagu alkumay Puntland oo kale.
Maxamed Axmed (Moqor)